ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲက ငှက်ကလေး တွေကို ကျွန်မ ဘာလို့ချစ်???
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲက ငှက်ကလေး တွေကို ကျွန်မ ဘာလို့ချစ်???
အီးမေးလ်ထဲက ရတာလေးပါ .. concept လေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ မျှဝေ လိုက်ပါတယ်
The Birds-IG-PR - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: The Birds-IG-PR
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 9:37 PM
စာတွေ အကုန် မမြင်ရပေမယ့် မြင်ရသလောက် ဖတ်သွားတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျမနေပဲ လုပ်စရာရှိတာ ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို နမူနာ ပေးထားတဲ့ heart-touching slide show လေးအတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
"Life isaconstant challenge, but it is worth to accept it..."
"..The bird never hushes or gives up, carries on singing and building, building and singing."
Thanksalot for this "Lesson in Perseverance"!